Indlela kangakanani Aphumelele consultants ukwenza? - Best Aphumelele Ukutya ngomkhenkce omileyo
Ukuchuma kobomi Ukutya okomileyo okungumkhenkce kwenza umgangatho ophezulu, iimveliso okunempilo ukukhuthaza ukudla ubomi obusempilweni kwaye wenze kulungiselelwa isidlo ngokukhawuleza ngomculo olukhulu kunye nomgangatho! Le yindlela enkulu yokukhuthaza esempilweni ngokunceda abantu ukuhlala kufanelekile, balahlekelwe okanye ukugcina andilalele, kunye nokuphucula imeko yabo yempilo-ntle ngokubanzi.
Imali ehlawulwe kumcebisi iyahluka ngokwamava akhe nolwazi, ubungakanani nokuntsokotha kweprojekthi kunye nendlela ekuvunyelwene ngayo nge-invoyisi. Ngokubanzi umntu unokulindela ukwenza $300-400 ngenyanga, kodwa kukho abantu abenza indlela yokubhatala enkulu – inkulu ngokwaneleyo ukuba ithathe indawo yengeniso yabo yenyanga.
Kutheni usiba ngumcebisi ngezoBomi?
Umvuzo omkhulu – Unokwenza imali kwi-intanethi / ngaphandle kweintanethi kwaye ubonelele ngamathuba angcono kusapho lwakho
Sebenza ujikeleze eyakho ishedyuli – ubhetyebhetye obonakalayo kunye nomsebenzi wobomi bokulingana – yeyakho ikamva lakho kwaye usebenzela inkululeko yezemali
Yenza umahluko kubomi babantu – Nceda abanye bafumane kwaye bahlale besempilweni, kubandakanya wena nosapho lwakho
Ukuze ube ngomnye wabacebisi ngobomi obunempumelelo, Apha ngezantsi zizinto onokuzifuna. Ngoku izakhono ezingezantsi ziyafuneka ukuba ubandakanya umthengi njengomcebisi ozimeleyo wokuphila. Kodwa unokuvelisa kwakhona ngokwazisa ngokutya okuKomileyo okuQinisekisiweyo kwi-Intanethi ngebhlog yakho, iwebhusayithi, Ijelo le-youtube, imidiya yoluntu okanye ipodcast.
Abacebisi bazele zizimvo. Ukuba ngumcebisi wobomi obunempumelelo; kufuneka ube nobuchule, kubuchule bokwakha iprofayili entle. Ubomi obunempumelelo bufana nentengiso yemultilevel, ukuyenza ibe nkulu apha, Kufuneka ube nemibono elungileyo, Kuya kufuneka uyazi ukuba ungazijika njani ezi zimvo zivelise iziphumo ezintle.
Ukudityaniswa kwazo zonke ezi zinto kuya kubonelela ngenkangeleko yabantu ababalulekileyo – abathengi bakho bangoku. Uhlobo oluhle lokuthengisa luya kubonelela ngenkangeleko eqinileyo ngalo lonke ixesha lokuthengisa, Oko kuthetha ukuba ufuna nje ukuphumla kwaye uvune izibonelelo. Yile nto uyifunayo, kunene?
Nyaniseka ukuba wenza ubudlelwane bakho noluntu ngaphakathi, ayiqhelekanga rhoqo, kunene? Kungenxa yokuba unezinye izinto ezibalulekileyo ekufuneka uzenzile. Ukucebisa ngempumelelo malunga nokuhambelana, kufuneka rhoqo ekunikezeleni iziphumo. Qhubeka uthengisa iimveliso kwaye ufundise nabanye.
– Ukuchuma ulwazi lobomi
Iarhente elungileyo iya kulazi ishishini lakho ngaphakathi nangaphandle. Bayakwazi iimveliso ezilungileyo, xa besiya kwinkampani kwaye banomdla wokuthenga ntoni. Baza kuba nakho "ukuxelela" ibali ukuba balixelele inkampani elithoba kwabalishumi baya kuphumelela. Ngaba ngokwenene uneli nqanaba lolwazi?
Iingcebiso ezilungileyo ziya kudala isicwangciso sokubonisana esiya kukunceda ufezekise iinjongo zakho zeshishini. Ungasisebenzisa isixhobo sakho ukuze ufumane abathengi, ukwenza oku, uya kufumana abathengi abafanelekileyo, ngesicwangciso esifanelekileyo. Ngaba ayingombono olungileyo?
Njengomcebisi wobomi obuchumileyo, uya kuba namava afanelekileyo okwenza yonke into, Ekuthengiseni nasekuthengiseni iimveliso. Ezi mhlawumbi azizizo izakhono onazo kumbutho wakho, ba?
Ukuchuma kwemivuzo yabacebisi ngokutya
Isikhundla somcebisi kwi-Thrive Life sisiphumo sentengiso yeqela lakho kunye nelabo. Ukuba usebenza nzima njengomcebisi, ukuqhubela phambili kwinqanaba lakho kuyindalo kwaye kulula.
Abacebisi ngeProsper Life bahlawulwa qho ngenyanga (ukongeza kwiibhonasi). Nalu uluhlu lwezinto ezifunyanwa ngumcebisi ophakathi. Qaphela ukuba oku kunokwenzeka kuphela ukuba abacebisi basebenza rhoqo kwinkampani rhoqo ngeveki.
Umhla wokugqibela awulungiswanga. Konke kuxhomekeke ekusebenzeni nzima komcebisi. Inokwahluka ngentla kancinci okanye ngezantsi kancinci. Olu luhlu lwenzelwe ukukunika umbono wokufumana umvuzo wobomi obuchumileyo. Sineephakeji zomcebisi, umlawuli, kunye nolawulo, isakhelo sesilivere, isigqeba segolide kunye neplatinum.
Ke eso sisicwangciso sekhomishini. Kodwa yintoni endinokuyenza ngokwenyani kwaye izakuthatha ixesha elingakanani?
Umcebisi: Umcebisi ophakathi ufumana $ 314 ngenyanga. Ngokwesiqhelo kuthatha 2 ukuya 4 iinyanga zomsebenzi osisigxina ukufikelela kweli nqanaba.
Umlawuli: Umlawuli unokufumana malunga $ 797 ngenyanga. Ithatha malunga 3 ukuya 6 iinyanga ukufumana eli banga.
Abaphathi: Umphathi unokufumana malunga $ 1,161 ngenyanga, kwi-avareji. Kwaye kuthatha malunga 5-10 iinyanga ukufikelela kolu luhlu.
Umphathi wesilivere: isakhelo sesilivere sikhulu kunesakhelo esiqhelekileyo. Ithatha malunga 9 ukuya 15 iinyanga ukufikelela kolu luhlu. Unokubanakho ukufumana umvuzo $ 2,366.
Umphathi weGolide: Enkosi ngokungaguquguquki kunye nokusebenza nzima, ungafumana iBakala lesiGqeba seGolide kwi 12 ukuya 20 iinyanga. Unokubanakho ukufumana umvuzo $ 3,334 kolu luhlu.
IPlatinam: Olu luphezulu kakhulu. Kwaye ngenene kuthatha umsebenzi omninzi ukufika apha. Ukuba ungasebenza nzima kwaye uzibophelele kule nqanaba, ngokuqinisekileyo ungakha ishishini eliyimpumelelo. Ithatha malunga 18 ukuya 30 iinyanga ukufumana eli banga. Amandla okufumana umvuzo aphakathi $ 11,313.
Ngaba uyafuna ukufunda okungakumbi malunga neTrive Life Fast Track kunye neephakeji zokuqalisa ukuze uqalise, bona ngaphezulu Apha. Ukuba ufuna ukuzama iimveliso zethu, jonga eyethu iimveliso ezinempilo kwaye ezimangalisayo apha
Eli nani ngokuqinisekileyo libonakala linomtsalane. Usenokucinga ngokungena kwangoko. Kodwa onke la manani angentla aya kuchatshazelwa ziimpawu zomnxibelelanisi kunye nesiphumo, imeko ebalulekileyo yeprojekthi, ukuhanjiswa okanye ukulindelwa kobomi obunempumelelo, kunye neshedyuli yokugqitywa kwenyathelo ngalinye.
Ke ngoko, ukuba unoluvo lweshishini, Kuyacetyiswa ukuba uyiqale kwaye utyale amandla owalondoloze kolu shishino kumanqanaba aliqela. Ishishini lakho linokuba yinto enkulu elandelayo. U-Lzuza ngakumbi malunga Ukuchuma kobomi ngokukhawuleza okuKhanyayo kunye neephakeji zokuqala ukuze uqalise. Ukuba ufuna ukuzama iimveliso zethu, jonga eyethuiimveliso ezinempilo kwaye ezimangalisayo apha okanye ubuyele kwiphepha lethu lasekhaya kwaye ufunde ngakumbi malunga Ukuchuma kokutya okuMileyo.
6 iingcinga kwi "Indlela kangakanani Aphumelele consultants ukwenza?”
UTshazimpuzi 18, 2020 e 12:23 emva kwemini
Ndiyazithanda iinkonzo zakho kwaye ndingathanda ukujoyina
Wena ukuba lithuba elinikiweyo kwaye ndiyathemba ukuba uthathela ingqalelo umdla wam kubacebisi abaphumelelayo
UTshazimpuzi 22, 2020 e 3:24 ndim
Ngokuqinisekileyo, please send us your contact info at [email protected] and we will connect with you to help.
EyeDwarha 16, 2020 e 4:52 ndim
Ndingathanda ukuba ngumcebisi, kodwa kuqala ndiyathanda ukuzama imveliso. Ndingaqala njani?
UChristine D Johnson
EyeNkanga 13, 2020 e 6:52 ndim
May 8, 2021 e 12:32 ndim
July 31, 2021 e 5:50 emva kwemini